အရေပြား ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ မာလကာရွက် – WunYan
အရေပြား ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ မာလကာရွက်
Posted on October 30, 2017 by whuk-46651
အရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရတာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုမရှိတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းတာ၊ လူပျို အပျိုဖော်ဝင်စပြုလာတဲ့အခါနဲ့ တခြားအကြောင်းလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားရဲ့မွေးညှင်းပေါက်တွေမှာ ဖုန်နဲ့အဆီတွေစုလာတဲ့အခါမှာ ဆားဝက်ခြံတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ၀ပ်နေတဲ့အဆီတွေက အရေပြားမှာယောင်ယမ်းတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ ၀က်ခြံဖုတွေထွက်လာကာအရေပြားကိုပျက်စီးသွားစေတာပါ။
အလှကုန်တွေက ငွေကုန်ကြေးကျများသလို အချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်း ကိုယ်နဲ့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ စာဖတ်သူတွေကို ၀က်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံ၊ အမည်းစက်တွေနဲ့ ပါးရေတွန့်တာတွေကို ကုသဖို့အတွက် ဆေးနည်းလေးက လက်တကမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျှဝေပေးပါရစေ။ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ မာလကာရွက်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ အရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေကို အခုလိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားမှာရှိတဲ့ အနာအဆာတွေနဲ့ အမည်းစက်တွေကို မာလကာရွက်သုံးပြီး လွယ်လွယ်ကူကူဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။ မာလကာရွက်မှာ အရေပြားအရောင်ကို ညီစေပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားတာကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ အရေပြားအတွင်းရော အပြင်မှာပါယောင်ယမ်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
အရေပြားထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ အချို့အဏုဇီဝရုပ်တွေက ၀က်ခြံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မာလကာရွက်မှာ အဆိုပါဘက်တီးရီးယားတွေကို ခုခံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ၀က်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ဇီဝရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ချေဖျက်ပေးပါတယ်။
၃. နီမြန်းပြီး နာကျင်ယောင်ယမ်းသောအရေပြား
Allergy ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖွဲ့စည်းလာတာကြောင့် အရေပြားမှာယားယံတာ၊ ယောင်ယမ်းလာတာ၊ နီမြန်းလာတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ မာလကာရွက်က Allergy ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေဖွဲ့စည်းလာတာကို တားဆီးနိုင်ပြီးတော့ အရေပြားကိုသက်သာရာရစေပါတယ်။
မာလကာသီးမှာ ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့Free radical ကိုတိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ ကင်ဆာဆန့်ကျင်ဓာတ်သတ္တိတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မာလကာရွက်ကတော့ အရေပြားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ပါးရေနားရေတွန့်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ခွက်တခုမှာ မာလကာရွက်တွေထည့်၊ ပြီးရင်ရေနည်းနည်းထည့် ကြိတ်ချေပြီး အနှစ်ရတဲ့အထိပြုလုပ်ပါ။ ပြီးတော့ အရေပြားပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အနှစ်ကိုသုတ်လိမ်းပေးပါ။ မာလကာရွက်အနှစ်က အရေပြားယားယံတာနဲ့ နီမြန်းတာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။
တစ်ဖန်မာလကာရွက်တွေကိုချေ၊ ရေထည့်ပြီးဆူအောင်တည်ပါ။ ရေကအညိုရောင်ပြောင်းပြီး ပျစ်လာပြီဆိုရင် မီးဖိုကချလိုက်ပြီး အအေးခံပါ။ ၀ါဂွမ်းလုံးလေးယူပြီး အအေးခံထားတဲ့ အရည်ထဲနှစ်ကာ အရေပြားပြဿနာရှိနေတဲ့နေရာလေးတွေကို သုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Credit : လင်းလင်း
အရပွေား ပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးပေးမယျ့ အစှမျးထကျတဲ့ မာလကာရှကျ
အရပွေားနဲ့ဆိုငျတဲ့ပွဿနာတှဖွေဈရတာက အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဈကျိုယျရညျ သနျ့ရှငျးမှုမရှိတာ၊ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးတာ၊ လူပြို အပြိုဖျောဝငျစပွုလာတဲ့အခါနဲ့ တခွားအကွောငျးလေးတှရှေိနိုငျပါတယျ။ အရပွေားရဲ့မှေးညှငျးပေါကျတှမှော ဖုနျနဲ့အဆီတှစေုလာတဲ့အခါမှာ ဆားဝကျခွံတှဖွေဈလာပါတယျ။ ၀ပျနတေဲ့အဆီတှကေ အရပွေားမှာယောငျယမျးတာတှဖွေဈလာပွီးတော့ ၀ကျခွံဖုတှထှေကျလာကာအရပွေားကိုပကျြစီးသှားစတောပါ။
အလှကုနျတှကေ ငှကေုနျကွေးကမြားသလို အခြို့ပစ်စညျးတှဆေိုရငျလညျး ကိုယျနဲ့အလုပျမဖွဈပါဘူး။ တကယျတော့ စာဖတျသူတှကေို ၀ကျခွံ၊ ဆားဝကျခွံ၊ အမညျးစကျတှနေဲ့ ပါးရတှေနျ့တာတှကေို ကုသဖို့အတှကျ ဆေးနညျးလေးက လကျတကမျးမှာရှိတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို မြှဝပေေးပါရစေ။ အလှယျတကူရနိုငျတဲ့ မာလကာရှကျကို အသုံးပွုပွီးတော့ အရပွေားနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပွဿနာလေးတှကေို အခုလိုဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။
အရပွေားမှာရှိတဲ့ အနာအဆာတှနေဲ့ အမညျးစကျတှကေို မာလကာရှကျသုံးပွီး လှယျလှယျကူကူဖယျရှားလို့ရပါတယျ။ မာလကာရှကျမှာ အရပွေားအရောငျကို ညီစပွေီး ဘကျတီးရီးယားတှပေေါကျဖှားတာကို ဟနျ့တားနိုငျတဲ့အစှမျးသတ်တိရှိပါတယျ။ အရပွေားအတှငျးရော အပွငျမှာပါယောငျယမျးတာတှကေို သကျသာစပေါတယျ။
အရပွေားထဲမှာ ဘကျတီးရီးယားနဲ့ အခြို့အဏုဇီဝရုပျတှကေ ၀ကျခွံဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ မာလကာရှကျမှာ အဆိုပါဘကျတီးရီးယားတှကေို ခုခံနိုငျတဲ့ပစ်စညျးပါတဲ့အတှကျကွောငျ့ ၀ကျခွံဖွဈစနေိုငျတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှနေဲ့ ဇီဝရုပျတှကေိုထိထိရောကျရောကျခဖြေကျြပေးပါတယျ။
၃. နီမွနျးပွီး နာကငျြယောငျယမျးသောအရပွေား
Allergy ဖွဈစနေိုငျတဲ့ပစ်စညျးတှဖှေဲ့စညျးလာတာကွောငျ့ အရပွေားမှာယားယံတာ၊ ယောငျယမျးလာတာ၊ နီမွနျးလာတာတှဖွေဈလာပါတယျ။ မာလကာရှကျက Allergy ဖွဈစနျေိုငျတဲ့ဓာတျတှဖှေဲ့စညျးလာတာကို တားဆီးနိုငျပွီးတော့ အရပွေားကိုသကျသာရာရစပေါတယျ။
မာလကာသီးမှာ ရောဂါအမြိုးမြိုးကိုဖွဈစတေဲ့Free radical ကိုတိုကျခိုကျပေးတဲ့ ကငျဆာဆနျ့ကငျြဓာတျသတ်တိတှေ ပါဝငျပါတယျ။ မာလကာရှကျကတော့ အရပွေားကိုပိုမိုကောငျးမှနျစပွေီး ပါးရနေားရတှေနျ့တာတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။
ခှကျတခုမှာ မာလကာရှကျတှထေညျ့၊ ပွီးရငျရနေညျးနညျးထညျ့ ကွိတျခပြွေီး အနှဈရတဲ့အထိပွုလုပျပါ။ ပွီးတော့ အရပွေားပွဿနာဖွဈနတေဲ့နရောတှမှော အနှဈကိုသုတျလိမျးပေးပါ။ မာလကာရှကျအနှဈက အရပွေားယားယံတာနဲ့ နီမွနျးတာတှကေိုသကျသာစပေါတယျ။
တဈဖနျမာလကာရှကျတှကေိုခြေ၊ ရထေညျ့ပွီးဆူအောငျတညျပါ။ ရကေအညိုရောငျပွောငျးပွီး ပဈြလာပွီဆိုရငျ မီးဖိုကခလြိုကျပွီး အအေးခံပါ။ ၀ါဂှမျးလုံးလေးယူပွီး အအေးခံထားတဲ့ အရညျထဲနှဈကာ အရပွေားပွဿနာရှိနတေဲ့နရောလေးတှကေို သုတျလိမျးပေးနိုငျပါတယျ။
Credit : လငျးလငျး